Translate Pashto to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Pashto to Myanmar (Burmese), Pashto to Myanmar (Burmese) translations, Pashto to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
اسلام عليکم څنګه ياست မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
ایا هلته شته؟ မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
زه له تاسو سره ډیره مینه لرم ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
د هامبورګ لګښت څومره دی؟ ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
ایا تاسو کولی شئ ټیکسي بللی شم؟ သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
زه بخښنه غواړم ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
بخښنه غواړم တဆိတ်လောက်
زه لیوالتیا لرم ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
زما پرواز ځنډیدلی و အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
زه دلته د سوداګرۍ لپاره یم ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
سلام زما نوم دی မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
زه بخښنه لرم، مګر زه واده کوم ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
زه غواړم تاسو څخه وپوښتم ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
ایا تاسو کولی شئ هوایی ډګر ته وایم؟ သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
اوس مهال څه شی دی؟ ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
دپولیسوډیرنزدی مدیریت چیرته دی؟ အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
ایا زه کولی شم د خپل تلیفون چارجر پور واخلم؟ ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
تاسې زما سره مرسته کولای شی؟ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
ما ته یو څښاک امر کړئ، مهرباني وکړئ؟ ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
دا څومره لګښت لري؟ ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
زه د ګلوټان ​​سره حساس یم ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
رنځور پوه ته تیلیفون وکړه ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
ایا ډاکټر دی؟ ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
ایا زه کولی شم اړیکه ونیسم؟ ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
مهرباني وکړئ خپل مالک ته بلنه ورکړئ. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
دا ځای ډیر ښه دی ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
مهرباني وکړئ هوټل ته لاړ شه ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
زما د کوټې شمېره څه ده؟ အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?